Miasa amin'ny Adderall: Milamina sa tsia? - Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina | Desambra 2021
Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Community, Company Ny Fizahana Fanatanjahan-Tena Mavesatra Lalao Fialam-Boly Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fiaraha-Monina Vaovao, Wellness News Mpanao Gazety Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina
Tena >> Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina >> Azo antoka ve ny manao fanatanjahan-tena rehefa mandray Adderall?
Azo antoka ve ny manao fanatanjahan-tena rehefa mandray Adderall?
Fampahalalana momba ny zava-mahadomelina Rx
Na manao fanatanjahan-tena tsy tapaka ianao, na manomboka manampy hetsika ara-batana amin'ny fanazaran-tena ataonao, dia zava-dehibe ny hitadidy an'izay fanafody mety raisinao. Ny fanafody, toy ny Adderall, dia afaka manova ny zavatra tsapanao taloha, mandritra ary aorian'ny fampihetseham-batanao. Raha ny ankamaroan'ny olona dia mahita fa manatsara ny Adderall ny azy fampisehoana kognita , misy olona manamarika fa ny fiasan'ny Adderall dia mety hisy fiatraikany amin'ny fiasa ara-batana koa.
Mifandraika: Inona no atao hoe Adderall? | Makà tapakila Adderall
Adderall dia fanafody famporisihana mitambatra izay matetika ampiasaina hanatsarana ny fifantohana, ny halavan'ny fifantohana ary ny fahamailoana amin'ireo olona miaraka aminy aretin-tsaina tsy ampy saina (ADHD) . Izy io koa dia afaka mampiroborobo ny fifohazana amin'ireo olona voan'ny aretin-torimaso antsoina hoe narcolepsy. Adderall dia misy amin'ny kapsily famotsorana aingana na famotsorana lava ( Adderall XR ).
Vokatry ny Adderall mahazatra
Adderall dia mety hiteraka voka-dratsy toy ny:
Tsy fahitan-tory, na olana amin'ny torimaso
Mihena ny fahazotoan-komana
Ny voka-dratsy dia mahazatra kokoa rehefa manomboka ny fanafody. Ny mpitsabo anao dia mety mieritreritra izay vokany tsapanao rehefa mamaritra fatra mety ianao. Ny doka avo loatra dia mety hampitombo ny mety ho voka-dratsy. Na izany aza, ny ankamaroan'ny voka-dratsiny dia malefaka ary lasa rehefa mandeha ny fotoana.
Mifandraika: Adderall vs. Adderall XR
Amin'ny ankapobeny, eny - azo antoka ny Adderall sy ny fampihetseham-batana, fa tsara kokoa ny mampiditra an'io fampihetseham-batana io alohan'ny handraisanao ny fatra isan'andro. Adderall dia mety hampitombo ny tahan'ny fo sy ny tahan'ny fisefoana, noho izany dia mety kokoa ny mihinana fanafody manaitaitra aorian'ny fampiharana fa tsy taloha. Ary alao antoka fa hiresaka amin'ny mpitsabo anao aloha.
Ny olona rehetra ao amin'ny Adderall dia tokony hifampidinika amin'ny mpamatsy azy ireo hamaritana raha azo antoka ny manao fanatanjahan-tena mandritra ny fampiasana ny fanafody, iray izay mahazatra ny tantaram-piainany sy ny haavon'ny hetsika, hoy izy Daphne Scott, MD , manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana amin'ny fanatanjahan-tena ao amin'ny Hopitaly ho an'ny fandidiana manokana any Manhattan, New York.
Inona avy ireo vokany mety haterak'i Adderall rehefa miasa?
Ny voka-dratsy dia mety hiteraka na miasa ny olona iray na tsia amin'ny Adderall. Na izany aza, Adderall dia afaka manana voka-dratsy izay mety hisy fiantraikany amin'ny fanazaran-tena mahazatra ataon'ny olona iray, toy ny:
Fiakaran'ny tahan'ny fo
Ny olona iray izay manana tantaram-piainana taloha tsy nahatsiaro fofonaina, fanaintainan'ny tratra, na fanina rehefa niasa dia tokony harahi-maso rehefa mandray an'i Adderall. Ireo voka-dratsy ireo dia mety matetika kokoa rehefa mandray anjara fanazaran-tena kardio , toy ny mihazakazaka na milomano lavitra. Mety misy ny risika mitombo amin'ireo voka-dratsy ireo rehefa nalaina niaraka tamin'ny stimulants hafa i Adderall (toy ny kafeina avy amin'ny kafe na supplement), na rehefa nalaina tamin'ny fomba hafa noho ny voatondro i Adderall (amin'ny doka marobe, avo lenta indray mandeha).
Antsoy avy hatrany ny mpitsabonao, na mitadiava fanampiana maika, raha mahatsikaritra fanaintainan'ny tratra ianao na manahirana miaina rehefa miasa ao amin'ny Adderall.
Azo ampiasaina ho fanampiana amin'ny fampihetseham-batana ve i Adderall?
SASANY ny mpikaroka mino fa ny fanafody manaitaitra, toa an'i Adderall, dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny fampihetseham-batana. Ny stimulants amin'ny ankapobeny dia manatsara ny fifantohana, ny fifantohana ary ny fifantohana, hoy i Steven Karceski, MD, mpampianatra mpanampy ny neurolojia ao amin'ny Weill Cornell Medicine. Mety misy lojika sasany amin'ny [fiantraikan'ny Adderall] amin'ny haingam-pandeha, tsy ny fahombiazan'ny saina fotsiny fa ny fahombiazan'ny vatana koa.
Ny taona faramparany dia nahita fiakarana tao amin'ireo olona mampiasa Adderall hanatsarana ny fahaizany ara-batana na hanohanana ny tanjon'ny fihenan-danja. Na dia afaka mampiroborobo tsy fahombiazana ara-batana sy fihenan'ny lanja aza i Adderall, zava-dehibe ny manamarika fa tsy tokony hisy haka Adderall raha tsy misy dokotera avy amin'ny dokotera. Ny fiasana amin'ny Adderall mba hanamafisana ny fahaiza-manao ara-batana dia tsy ara-dalàna sy mampidi-doza.
Fanararaotana na fampiasana diso an'i Adderall dia mety hampitombo ny mety ho voka-dratsiny, izay mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fanarenana ny vatana aorian'ny fampiofanana ary mitarika vokany ratsy eo amin'ny fahasalamana . Amin'izao fotoana izao dia tsy ekena Adderall ampiasaina ho famenon-tsakafo na pilina pilina, ary sokajiana ho a Fandaharam-potoana voafehy izay atahorana mafy fanararaotana sy fiankinan-doha ara-batana na ara-tsaina.
Raha sendra olona iray izay mety mitady hihinana fanafody tsy misy dokotera aho dia kivy mafy aho noho izany [mety] fahavoazana amin'ny fampiasana fanafody voafehy nefa tsy misy fanaraha-maso araka ny tokony ho izy, hoy ny fanazavan'i Dr. Scott.
Ahoana no mety hifandraisan'i Adderall amin'ny famenon-tsakafo?
Adderall, na dia nalaina araka ny voatondro aza dia mety hanimba rehefa atambatra amin'ny manaitaitra hafa. Ny ankamaroan'ny famenon-tsakafo alohan'ny fanazaran-tena dia misy karazana kafeinina, mpiorina fantatra. Ny fihinanana fanentanana mihoatra ny iray isaky ny mandeha dia afaka mampitombo ny adin-tsaina amin'ny fo ary mitarika olana amin'ny fo. Amin'ny tranga henjana, ny fampifangaroana stimulants dia mety miteraka aretim-po na lalan-dra, indrindra amin'ireo olona manana tantaran'ny aretim-po na fiakaran'ny tosi-drà.
Miresaha amin'ny mpitsabo anao na amin'ny farmasinao alohan'ny handraisana vitamina na famenon-tsakafo. Afaka manampy anao hamantatra ny loza mety hitranga ianao amin'ny fifangaroana zava-mahadomelina ary hanoro anao ny fomba hampidirana suplementement amin'ny fahazaran-dratsinao, raha ilaina izany. Ny resadresaka misokatra miaraka amin'ny ekipa mpitsabo anao dia afaka manampy anao hihazona fomba fiaina mavitrika amin'ny fomba azo antoka indrindra.
VIDEO: Ny fiofanana tsara indrindra ho an'ny abs
Inona ny gripa?
firy ny ibuprofen azoko omena 200mg
inona no mitranga raha maka zoloft 2 ianao ao anatin'ny iray andro
mahatonga ny fitomboan'ny fiterahana ve ny valan-jaza
ohatrinona ny fitifirana ny fiterahana raha tsy misy fiantohana
tokony mihinana probiotika ve ianao mandritra ny antibiotika
dia bupropion fampisehoana amin'ny 10 tontonana fitsapana zava-mahadomelina